Chiono Laser Kutema Muchina - Goridhe Laser
CO2 Laser Muchina
Chiono Laser Kutema Machine
Label Laser Die Kucheka Muchina
Tsika Laser Machine
Fibhi Laser Kutema Muchina
Metal Sheet Laser Kutema Machine
Sheet uye Tube Laser Cutter
3D Robhoti Laser Cutter
Fabric Mhepo Kupararira
Sublimation Yakadhindwa Fabric
Sportswear & Active Kupfeka
Yekumhanyisa Yekupepeta Pa-iyo-Fly Laser Kutema Series
Kuona Kukwikwidza Laser Kutema Mashini e Sublimation Machira
Uchishandisa iyo tekinoroji yekuongorora, iwo maviri makamera anotora zvakashata uye anoendesa iyo yekucheka data kune laser zvakananga. Iyo ndiyo yakapusa nzira yekucheka dhayi sublimation prints. Pane zvisarudzo zvinoverengeka mukati meye software software yemashandisirwo akasiyana uye zvinodiwa.
Laser kunobva: CO2 girazi laser / CO2 RF simbi laser
Laser simba: 70 watts / 100 watts / 150 watts
Nzvimbo yekushanda (W × L): 1600mm × 1300mm (62.9 "× 51")
Nharaunda kamera kamera (W * L): 1600mm × 800mm (62.9 "× 31.4")
Software: GoldenCAD Vision Kuongorora Software Package
Tafura yekushanda: Tafura inoshanda tafura
Maximum Speed: 1 ~ 400mm / s
Yakakwira Precision Vision Laser Kutemwa neKunyoresa Makaki
Kamera Kunyoresa Laser Kutema Machine
Iyo laser cutter yakagadzirirwa yakakwirira chaiyo tsvina mabhii materu, nhamba uye mabhii kucheka. Muchina uyu unoshandisa mamaki ekunyoresa , uye Software iri mukati mechina rine kukanganisa basa rekubhadhara, iro rinogona kungoziva zvaro rakasanganiswa pane dhayi zvigadziriso.
Nzvimbo yekushanda (W × L): 1600mm × 1000mm (62.9 "× 39.3")
Maitiro ekuziva: Tube kamera inozivikanwa
Yakasununguka Dual Musoro Smart Vision Laser Kutema Series
Kaviri Musoro Laser Kutema Muchina neKamera
Iyi laser cutter ine HD kamera yakanakira kune chaiyo yekukara contour kucheka. Nemisoro miviri, kumhanyisa kumhanya kunokurumidza, kuwedzera simba rekugadzira uye kuita purofiti yakawanda.
Yakashandiswa zvakazara muzvipfeko zvakadhindwa, yakadhindwa shangu kumusoro, 3D ichibhururuka yakaruka vamp, embroidery patches, yakarukwa lebel, flags, sublimation indasitiri.
Laser kunobva: CO2 girazi laser
Laser simba: 130 Watts
Ultra-Huru Fomati Vone Laser Kutema Series
Yakakura Fomati Laser Kutema Muchina weBanners, Graphics, Soft Signage
Iyi laser cutter yakagadzirirwa zvakananga kune indasitiri yekudhinda indasitiri uye anodhinda masevhisi evatengi. Laser system inogona kugadzirwa muhupamhi kusvika 3.2 metres uye marefu kusvika pamamita mana.
Nzvimbo yekushanda (W × L): 3200mm × 4000mm (10.5 ft x 13.1ft)
Nharaunda kamera kamera (W * L): 3200mm × 1000mm (10.5 ft × 3.2ft)
Tube Camera Laser Kutema Series
Tube Camera Laser Kutema Machine
Iyi laser cutter yakagadzirirwa zvakanyanya kutemwa kwemahebhu akarukwa, embelsery mavara uye ematehwe ematehwe. Iyo laser musoro yakashongedzerwa neCCD kamera yekuziva otomatiki kucherechedzwa uye kucheka kwemifananidzo.
Laser simba: 65W, 80W, 110W, 130W, 150W
Nzvimbo yekushanda (W × L): 900mm × 500mm / 1600mm × 1000mm / 300mm × 200mm
Tafura yekushanda: Huchi inoshanda tafura / Conceror tafura inoshanda
CO2 Laser Kutema Engraving Machine